Faah faahin iyo Sawiro Kulamadii ugu dambeeyay ee Madaxweynaha DFS ee Japan – SBC
Faah faahin iyo Sawiro Kulamadii ugu dambeeyay ee Madaxweynaha DFS ee Japan
Posted by Webmaster on June 2, 2013 Comments
Maalmihii ugu dambeeyay Magaalada Yokohama ee Dalka Japan waxa ku sugnaa Madaxweynaha Dowlada Federaalka Soomaaliay Xasan Sheekh Maxamuud, isagoo halkaasi kaga qeyb galay Kulamo Africa iyo Soomaaliyaba loogaga hadlayay.
Waxa uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Halkaasi kulamo xasaasi ah kula qaatay madax kala duwan oo caalamka kale iyo Africakaba ka mid ah waxana kulamadii ugu dambeeyay uu la qaatay xubno sar sare oo qaramada Midoobay iyo dowladaha Caalamka ahba isugu jira.
Hassan Sheikh Mohamud Madaxweynaha Soomaaliya ayaa kula kulmay Yokohama Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey Ban Ki-Moon.
Labada Mas’uul ayaa ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen Ergeyga Gaarka ee Xoghayaha Guud ee QM Nick Kay oo maalinta maanta ah ah booqanaya Muqdisho si uu howshiisa cusub u bilaabo, arrimaha amniga, iyo sidii QM ay kaalin hoggaamineed uga qaadan laheyd dib-u-dhiska dalka.
Xoghayaha Guud ee QM Ban Ki-Moon ayaa ammaanay dadaalka iyo horumarka Soomaaliya waxuuna sheegay in QM ay kaalmo buuxda la garab taagan tahay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. isagoona uga mahadceliyey Madaxweynaha saxiixii ay Soomaaliya saxiixday heshiiska caalamiga ah ee ka hortagga hubka Sunta ah. XG ee QM ayaa sheegay in Ergeyga cusub ee Soomaaliya ka howlgalaya laga bilaabo berri inuu la imaan doono isbedel buuxa oo dhammaan hay’adaha QM ay u soo guuri doonaan Soomaaliya..
Waxa uu Madaxweyne Xasan Sidoo kale kula kulmay Yokohama Xubno ka mid ah Baarlamanka Dalkaasi Japan isagoo kala hadlay arimo dhowr ah.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxuu kulan la qaatay Hon Noriko Shirasu oo ah xubin baarlamaanka Japan una qaabilsan xiriirka Africa. Labadan mas’uul ayaa ka wada qeybgalay xaflad oo ay la wada hadleen dadkii Japanese ka ee ka soo qeybgalay.
Madaxweynaha ayaa shacabka Japan siiyey warbixin kooban ee xaaladda Somalia, sheegeyna in maanta uu jiro rajo iyo horumar oo Somalia ay cagaheeda isu taagtay. Madaxweynaha ayaa sheegey inuu ku faraxsanyahay inuu yimaado Japan oo uu la kulmo Ra’iisul Wasaare Shinzo Abe isla markaana xiriirkii Japan iyo Somalia dib loo cusbooneysiiyey. Madaxweynahu waxuu sheegay in Somalia ay rajo weyn ka qabto in Japan ay wax kala qabato sidii dalka dib loogu dhisi lahaa.
Dhinaca kale Akihiko TANAKA oo ah Guddoomiyaha Hay’ada Xiriirka Caalamiga ee Japan (Japan Internatioanal Cooperation Agency (JICA)) ayaa waxaa la kulmay madaxweynaha Dowlada Soomalaiya.
Kulanka Labada mas’uul ayaa ka wada hadlay go’aankii Ra’iisul Wasaaraha Japan Shinzo Abe ee ahaa in Somalia si toos ah kaalmada Japan loo siinayo Dowladda iyo mashaariicda horumarineed ee Somalia u baahantahay.
Mr Tanaka ayaa marka hore uga mahadceliyey Madaxweynaha Somalia booqadiisha dalka Japan iyo ka qeybgalka shirka TICAD V oo maalmahan ka socda magaalada Yokohama ee Japan iyo horumarka Somalia ay maanta ka gaartay dhanka siyaasadda amniga iyo xasilinta dalka.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamud ayaa isna sidoo kale u mahadceliyey marti-gelinta Japan ay u fidisay iyo hoggaanka saliimka ah ee ay ka qaadatay arrimaha Soomaaliya.
Waxaa kale oo uu Madaxweyne Xasan Sheekh kala hadlay arimaha Soomaalida ku dhaqan dalkaas South Africa Madaxweynaha Dalkaasi Koonfurta Africa
Xiriirka labada dal, iyo sidii Soomaalida degen South Africa ay ammaankooda loo kafaalo qaadi lahaa ayaa ugu weynaa wada hadalka labada dhinac, waxaana ugu dambeyntii ay ku soo gaba gaboobeen si wanaagsan oo is afgarad iyo balanqaad leh..
Madaxweynahu waxuu kaloo la kulmay mas’uuliyiin ka socotay Midowga Yurub oo uu kala hadlay Shirka Brussels ka dhici doono 16ka September 2013. Sidoo kale Mas’uuliyiin ka socotay hay’adaha Japan ayuu madaxweynahu la kulmay.
Dhamaan Kulamadaas uu madaxweyne Xasan Sheekh la qaatay dhinacyada kala duwan ee kor ku xusan iyo kuwakaleba waxa ay ku soo dhamaadeen si wanaagsan oo farxad iyo reyn reyn leh.